Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်)
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Hydroxocobalaminသည် ဗီတာမင် တမျိုးဖြစ်သည်။
ခန္ဓါကိုယ်တွင် Vitamin 12 ဓါတ် မြှင့်တင်ရန် လိုအပ် သည့်အခါတွင် သုံးကြပါသည်။
များသောအားဖြင့် Novobedouzeကိုအစာအဟာရ ချို့ တဲ့ခြင်းအပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်း၊ Vitamin B12 ဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်း နှင့် Vitamin B12 ချို့တဲ့ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်သော Schilling test လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Novobedouze ကိုထိုးဆေးအနေဖြင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် သာထိုးလေ့ရှိပါသည်။
အကယ်၍သင်သည် မိမိဘာသာအိမ်မှာထိုးမည်ဆိုပါက မိမိဧ။်ဆရာဝန်က သင်ပေးသည့်အတိုင်းဂရုတစိုက် လိုက်နာကျင့်သုံးရပါမည်။
အခန့်မသင့်၍ ဆေးအမှုန်များ ပါဝင်နေလျှင် သို့မဟုတ် အရောင် ပြောင်းနေလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးပုလင်းအက်ကွဲနေလျှင် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးနေလျှင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
ဆေးပုလင်း၊ဆေးထိုးအပ်များကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။
ဆေးထိုးပြွန်၊ အပ် များနှင့် အခြားသုံးပြီးသော ဆေးပစ္စည်းများကို ပြန် မသုံးပါနှင့်။ မိမိဧ။် ဆရာဝန် ကိုသုံးပြီးသောဆေးပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျ စွန့်ပစ် ရမည့်နည်းလမ်းများကိုမေးပြီးသုံးပြီးပါက သေချာစွန့်ပစ်ပါ။
Novobedouze အသုံးပြုနည်း နှင့်ပက်သက်၍ မေးခွန်းတစ်စုံတရာရှိပါက သင့်ကိုကုသပေးသော ဆရာဝန်ကို မေးပါ။
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
NOVOBEDOUZE(ထိုးဆေး)ကိုများသောအားဖြင့် တာဝန်ခံဆရာဝန် ကသာသိမ်းဆည်းပါသည်။ အကယ်၍မိမိဘာသာအိမ်မှာအသုံးပြုပါကဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သိမ်းဆည်းပါ။ ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါ။
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
NOVOBEDOUZEကိုမသောက်မီတွင်အောက်ပါ အချက်များရှိနေလျှင် သင်ဧ။်ဆရာဝန်ကို အသိပေးသင့်သည်၊
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်သို့မဟုတ် မိခင် နို့တိုက် နေချိန် ။ အကြောင်းမှာထိုအချိန်တွင် ဆရာဝန်ထောက်ခံသော ဆေးများကိုသာသောက် သင့်ပါသည်။
အခြား မိမိဘာသာသုံးစွဲနေသောသဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ၊တိုင်းရင်း ဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေလျှင် ။
NOVOBEDOUZE ၏ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်၊ အခြားမိမိနှင့် မတည့်သောဆေးဝါးများရှိလျှင်။
ဆရာဝန် မညွှန်ကြားဘဲ ဗီတာမင်အားဆေးများကို ပမာဏအများကြီး မသောက်ပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေ ကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများ အားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သွေးပေါင် အပြောင်းအလဲဖြစ် ခြင်း
ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊နီရဲ ခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
(ယခုဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
NOVOBEDOUZEဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီးဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အထူးသဖြင့် omeprazole(အိုမီပရာဇော) ခေါ် အစာအိမ်ဆေးသောက်သုံးနေလျှင် Hydroxocobalamin ၏အာနိသင်ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
NOVOBEDOUZE ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီးဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
NOVOBEDOUZE ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Vitamin B12 ချို့တဲ့ရောဂါ ကုသရန်
၅ ရက် ကနေ ၁၀ရက် အထိနေ့စဉ် 30 mcg(microgram) အသားဆေးထိုးရပါမည်။ ထို့နောက် ၁ လ ၁ခါ 100 mcg ကနေ 200 mcg ထိုးရပါမည်။
အကယ်၍ ရောဂါ အခြေအနေပြင်းထန်လျှင် ၊ အာရုံကြောရောဂါ ရှိလျှင်၊ ကူးစက်ပိုးဝင်ရောဂါ ရှိလျှင်၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းလွန်ကဲသောရောဂါရှိလျှင် ထိုးဆေးပမာဏ တိုးပါ။
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ လုံလောက်သော သွေးနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်ချက်များ ရရှိအောင် ဆေးပမာဏကို လုံလုံလောက်လောက် ပေးရပါမည်။
ပုံမှန် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းစုပ်ယူအားရှိပါက Vitamin B12 15mcg ပါဝင်သော Multivitamin ကိုနေ့စဉ် ပါးစပ်မှသောက်နိုင်ပါသည်။
Vitamin B12 ချို့တဲ့မှုရှိမရှိစမ်းသပ်ရန် (Schilliing Test) ဆေးပမာဏ – 1000mcg flushing dose
ကလေးတွေအတွက် Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စုစုပေါင်းအချိုးအစား 1- 5mg ကိုအချိန်ကာလ ၂ ပတ် နှင့် အထက် 100mcg ပေးပြီးနောက် 30 -50 mcg ၄ ပတ် တခါ ဆက်ပေးကာထိန်းထားရပါမည်။
Novobedouze (နိုဗိုဘီဒိုဇ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
NOVOBEDOUZE ကို10mg/2ml ထိုးဆေးအနေဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
NOVOBEDOUZE ကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။